Isitolo esidayisa yonke impahla ZHS3200 2.0CBM Self Loading Concrete Mixer Truck Manufacturer and Supplier | Kalula
Sikulungele ukwabelana ngolwazi lwethu lokumaketha emhlabeni wonke futhi sincoma imikhiqizo efanelekile ngezindleko ezinolaka kakhulu. Ngakho-ke amathuluzi we-Profi akunikeza inzuzo enhle kakhulu yemali futhi sikulungele ukukhiqiza eceleni komunye nomunye ngeFektri eyenziwe ngokwezifiso ye-China Small Self Loading Concrete Mixer Truck, Izinhloso zethu eziyinhloko ukuletha abathengi bethu emhlabeni wonke ngekhwalithi ephezulu, intengo yokuthengisa ngokuncintisana, ukulethwa okwanelisayo nokuvelele abahlinzeki.
Ifektri eyenziwe ngokwezifiso ye-China Concrete Mixer Truck, I-Self Loading Concrete Truck, Izinti zethu zinamathela kumoya "Wokuqina Okusezingeni Eliphelele Nentuthuko Esebenzisana", kanye nenkolelo yokuthi "Ikhwalithi Yeklasi Lokuqala Enensizakalo Ehle Kakhulu". Ngokuya ngezidingo zawo wonke amakhasimende, sinikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso nezenziwe ngezifiso ukusiza amakhasimende ukuthi afinyelele izinhloso zawo ngempumelelo. Yamukela amaklayenti asekhaya naphesheya ukubiza futhi abuze!
Imodeli: Yuchai 4102 ishaja kakhulu
Ukufuduswa kwePiston, Isilinda: 3.8L, 4cylinder kulayini
Ukupholisa: Amanzi selehlile, Isihlungi somoya owomile
Amandla amakhulu: 78kw （116hp）
IMax Torque: 252NF @ 2400RPM
Enye into engu-28V – 1500Wa (53.5A)
Ibhethri: 2 × 12V-80AH (272A)
Ukuqondisa okusizayo kohlelo lokuqondisa amandla wokungeniswa okunomthwalo ophindayo ophindwe kabili kumasondo wokushayela we-2.
Ukushayela okungu-4 * 4
I-hydraulic torque converter gearbox, i-hydraulic gear pump, idivaysi yokulawula igiya ebuyela emuva. Lawula "isivinini sokusebenza" kanye "nesivinini sokuhamba"
3 – phambili, 3 – Ingemuva
Izinga lokuqala: 0-5km / h
Ilevi yesibili: 5-15km / h
Izinga lesithathu: 15-30km / h
Ukuhamba kwamasondo amane, isinciphisi sejubane lohlangothi lwamasondo, isinciphisi segiya, isivinini sokuxhuma kwe-flange.
Ngemuva kwebhuloho, jika (+ 28 degrees), ukumiswa kwebhuloho kwegiya lokunciphisa igiya leplanethi.
ITire: 16-70-22.5PR ， Ubukhulu bomthwalo: 9500kg, 970kPa
Ibhuleki yangaphakathi yohlobo lwamasondo kanye ne-brake ephuthumayo isetshenziswa kumasondo ama-4, futhi kusetshenziswa ipompo elincane le-servo kwisekethe elizimele elikabili. Negative ingcindezi uhlobo yokupaka ukubopha, phambi oluvala amasondo ukumiswa ihabhu yangaphakathi.
Iphampu lamanzi “Yokuzikhuza” 24V
Ukugeleza: 90L / M
Amathangi wamanzi amabili anokuxhumeka okuhlangene nokusatshalaliswa okuhlobene, umthamo 2 * 410L。
Ngokusebenzisa imitha yokugeleza kagesi nesibonisi segumbi lokusebenza endaweni okungena kuyo ukungena kwedramu yokulawula.
Ungahlala esihlalweni sohlangothi lomshayeli ukuze unike amandla iphampu.
Imoto eshaywayo enompompi wamanzi ophakeme
Isigubhu sesigaxa esiphindwe kabili esinezikulufu ezivunguza kabili zomoya ophansi kanye ne-convex bottom.
Umthamo wesigubhu: 3200L
Ijubane lokujikeleza kweDrum: 17rpm
Ukukhishwa Kokhonkolo: 2.5m³ / container
Uhlaka “lwesihlalo sehhashi esinamandla” oluyindilinga lungafakwa ama-degree angama-180 nokushintshana ngokubacindezela, ukukhiya okuzenzakalelayo ngebhuleki yokubacindezela. I-roller ijikeleza ngepompo yegiya kanye nemoto eyi-hydraulic esifundeni esivulekile, esine-valve kagesi esetshenziswayo egumbini lokusebenzela nasemuva kwesixubi.
Isinqe esikhiphekayo singaqinisekisa ngqo ngokusebenzisa i-hopper elayishayo. Njengoba ukumiswa okujwayelekile kunikeza isandiso se-chute esingu-1.
Impompo yegiya: Iphakethe lomkhiqizo / laseMelika
Ukugeleza: 138 / 88L / Min.
Isicucu esingu-3 siphatha isibambo sokulawula imisebenzi eminingi.
Aluminium ukushisa kokupholisa kawoyela wokubacindezela.
Kuvaliwe uwoyela itheku, kungashintshwa isihlungi sangaphandle samafutha wokubacindezela.
Ingalo yokulayisha ifakwe inzwa enesisindo esizenzakalelayo, idivaysi yokulayisha esebenza kabili kanye nesilinda kawoyela sokusetha kabusha, futhi itheku lokulawula okuphakelayo elinombhalo linomsebenzi ojwayelekile wokugqugquzela.
Iyalayisha izikhathi ezigcwele: 6times
Igumbi lokusebenza elivalwe linohlelo lokushisa / lokupholisa, iwindi langaphambili elithambekele.
Izihlalo ezenziwe ngabantu, ukumiswa kokumiswa okuguqukayo nokusebenza kokulungiswa kokuphakama.
Uwoyela umfutholuketshezi: 200L
Amafutha weLub: 16L
Isethi ephelele: 7500kg
Umthwalo omkhulu: 8500kg
Ubude × ububanzi × ukuphakama: 5300 × 2350 × 2950 mm
Ithebula lokuqhathanisa umkhiqizo
Iloli lokuxuba ukhonkolo ozimele
Iloli lendabuko lokuxuba ukhonkolo wendabuko omkhulu
Ukudla okuzenzakalelayo, kungasetshenziswa njenge-forklift
Ukuhlanganiswa okuzenzakalelayo kokhonkolo ukuze kusebenze kahle
Can ezokuthutha ukhonkolo
Khipha ukhonkolo ngokuzenzakalela bese usebenzisa ngqo lapho kudingeka khona
Izinto zokuhamba ezi-1
Umshini ngokwawo mncane futhi uguquguquka, ungazungeza ama-degree angama-180 uwodwa, ofanele wonke amaphrojekthi, ngaphandle kwemikhawulo kubude, ububanzi, njll.
Ithangi lokuxuba, i-blade yokuxuba nokuma kwemikhiqizo yethu konke kuyimikhiqizo enelungelo lobunikazi elenziwa yithi. Ukhonkolo oshukunyisiwe uhlangabezana nezinga likazwelonke kanye nelaseYurophu, futhi amakhasimende angakusebenzisa ngokuzethemba.
Ngokuphathelene nezimoto zobunjiniyela bemishini, ungangena emgwaqeni ngaphandle kwepuleti lelayisense.
Ukonga abasebenzi, abantu ababili bayakwazi ukusebenza, abantu abane bangasebenza iphrojekthi encane.
Imoto inkulu futhi inzima, ngakho-ke ivame ukukhawulelwa ukuphakama, ikhawulelwe kuthrafikhi, njll.
Okukhulu ngobuningi futhi ivolumu, ilungele ukuthuthwa ngobungcweti, kepha akulula ukulayisha nokulayisha.
1.Imoto inkulu futhi inzima, ngakho-ke ivame ukukhawulelwa ukuphakama, ikhawulelwe kuthrafikhi, njll.2.Large ngobuningi futhi ivolumu, ilungele ukuthuthwa ngobungcweti, kepha akulula ukulayisha nokulayisha.
Ithebula lokuqhathanisa nomunye umkhiqizi
AMANDLA AMAKHULU Ukuzilayisha iloli lokuxuba ukhonkolo
Umfutholuketshezi uwoyela kupholile
Iloli ngalinye lifakwe i- uwoyela wokubanda opholile mahhala ukuqinisekisa ukusebenza kwamahora angama-24 ngaphandle kokuphazamiseka Awunayo le ngxenye noma ukhokhise ngokungeziwe.
Isivinini esishukumisayo semodeli efanayo:
Isiqukathi esingu-5 kuya ku-8 / ihora 3 kuya ku-4 isitsha / ihora
I- imishini ingalo ingakwazi phenduka ne- ukuxuba ithangi ngaphandle kokuthinta ukulayishwa bese ugcine isikhathi esithe xaxa. Ingalo kumele yehliswe phansi bese ethula.
Kusinda kakhulu kunabanye ngenani lokulayisha eliningi Imvamisa sebenzisa i-asi elula ukuze ulondoloze izindleko kodwa uzoletha amaphazili ekhwalithi amaningi.
Ngemuva kokwelashwa kwethu kwe-welding nokushisa, izindinganiso zekhwalithi kanye nekhwalithi kulawulwa ngokuqinile yithi. Ngokuvamile kuhlinzekiwe by omunye umphakeli, ikhwalithi kunzima ukukuqinisekisa futhi kulula ukulimaza
Qinisekisa ukulayishwa okubushelelezi futhi ugweme ukuphazamiseka ngenxa yomonakalo we-hydraulic cylinder ngesikhathi sokukhipha Akunasilinda se-hydraulic noma ikhwalithi eyisilinda empofu
16°,Ivumelana nezindinganiso zethangi laseYurophu nelaseMelika, ukusebenza kahle kokuxuba kuphakeme kunabanye
19° noma 20°, yize ingenza ithangi liqukethe izinto eziningi, yandisa umthwalo ethangini nasemotweni, inyusa izinga lokwehluleka, futhi ayisebenzi kahle.
Azikho izinyathelo zokuphepha, ukusebenza okulula, noma ikuphi ukulahleka okubangelwe ukusebenza okungafanele kwe-opharetha, sizothatha sigcwele ukuphendulaility ngakho konke ukunxeshezelwa
Umsebenzi unzima, awunakho ukuqeqeshwa, futhi awunasibopho sokulahlekelwa okubangelwe ukusebenza okungafanele
Olandelayo: ZHS4000 3.0CBM Self Ilayisha Ukhonkolo Mixer Truck